Inkastoo laga faraxashay khilaaf siyaasadeedkii ka dhashay mooshinkii laga keenay guddoomiyihii xilka iska casilay Prof Maxamed Cismaan Jawaari, mar kale baarlamaanka Soomaaliya ayaa wajahaya khilaaf ka abuurmaya qodob sharciyeedka ah cida u tartami karta xilka guddoomiyaha Golaha Shacabka. | Awdalmedia.com
Inkastoo laga faraxashay khilaaf siyaasadeedkii ka dhashay mooshinkii laga keenay guddoomiyihii xilka iska casilay Prof Maxamed Cismaan Jawaari, mar kale baarlamaanka Soomaaliya ayaa wajahaya khilaaf ka abuurmaya qodob sharciyeedka ah cida u tartami karta xilka guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Wed 18 April 2018.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in marka la eego habka ay ku dhisan tahay dowladda ee 4.5 in kaliya kursigan u tartami karaan xildhibaannada ku abtirsada beesha uu ka soo jeedo guddoomiyihii is casilay Prof Jawaari, isaga oo meesha ka saaray in cid walba u furan tahay in ay isku soo taagto qabashada xilka guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Laakiin aragti taa ka duwan waxaa qaba xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo sheegay in musharax kasta oo buuxiya sharuudaha laga rabo in uu u furan tahay qabashada xilka guddoomiyaha Baarlamaanka iyadoo aan loo eegin beesha uu ka soo jeedo, waxaana uu arin sharci darro ah ku tilmaamay in beel kaliya sida uu hadalka u dhigay lagu calaamadiyo in ay isku soo taagto guddoonka Golaha Shacabka.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in xildhibaanno ka tirsan garabkii sida weyn u taageeray Prof Jawaari qorsheynayaan in ay isku soo taagaan qabashada xilka guddoomiyaha Golaha Shacabka kuwaa oo marka awood qeybsiga beelaha ee dowladda Soomaaliya la eego ku heyb noqonaya ra’iisal wasaare Kheyre.
Balse dagaal siyaasadeedka socda awgii ayaa laga yabaa in ay jirin karaan xildhibaanno kale oo maalmaha soo socda shaacin doona musharaxnimadooda kuwaa qaar ka mid ah durbaba siweyn dadku u hadal hayaan
Waa Qalinkii Wariye C/xakiin Xasan Faarax